Shangri-la ၏ဒဏ္ဍာရီဇာတ်လမ်းများ:စပျစ်သီးပြွတ်ချေခြင်းဟာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ် ဗြိတိန်နိုင်ငံ slot နှစ်ခု အွန်လိုင်း Net က Entertainment ကဖွံ့ဖြိုးပြီးဂိမ်း. ဒါဟာဖြစ်ပါသည်6reels နှင့်5Desktop ပေါ်မှာရရှိနိုင်ပါသည်ပေးသောအတန်း slot က, မိုဘိုင်းနှင့်တက်ဘလက်ပစ္စည်းတွေ. ဤသည်ဗြိတိန် slot နှစ်ခုအွန်လိုင်းဂိမ်းကစားသူနိမ့်ဆုံး၏အုပ်စုများကိုဖန်တီးရန်ရှိသည်သောအောက်ချောမွေ့ဂိမ်းရှိပါတယ်9အစားလက်ဝဲမှလက်ယာ payline ၏အလျားလိုက်သို့မဟုတ်ဒေါင်လိုက်မြင်ကြဖြစ်ကြောင်းတူညီသင်္ကေတများ. ဒါကအွန်လိုင်း slot ဆိုက်ကို slot ကဂိမ်း£ 0.10 ၏နိမ့်ဆုံးလောင်းကြေးနှင့်£ 200,00 အများဆုံးလောင်းကြေးနှင့်အတူကစားရနိုင်.
ဒီထိပ်တန်းဗြိတိန် slot အွန်လိုင်းအတွက်ကြီးမားသောအနိုင်ပေးထွက်ဖမ်းရန် Play !!
ဤ ဗြိတိန် slot အွန်လိုင်းဂိမ်း ကျော်ကြားတဲ့စာရေးဆရာဂျိမ်းစ်ဟီလ်တန်အားဖြင့်ဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဆန်းကြယ်မှုများဟိမဝန္တာနိုငျငံတျောသညျအပျေါမှာအခြေတည်ထားပြီး. ဒါဟာအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ Animation နဲ့ပုံရိပ်ယောင်များနှင့်အတူအံ့ဖွယ်ဒီဇိုင်းပတ်ဝန်းကျင် features. ဒါကအွန်လိုင်း slot ဆိုက်ကိုကစားသမားတစ်အကြီးအကျယ်ထီပေါက်ဝင်ငွေမှခွင့်ပြု 10,000 သူတို့ရဲ့အစုရှယ်ယာ၏ကြိမ်. အဆိုပါ RTP ဖြစ်ပါသည် 96.59%.
အဆိုပါ slot ကပါဝင်သည်3နေသောဂုရု icon များ2ရာထူးမြင့်မားတဲ့- မျောက်, အဆိုပါကြောင်နှင့်ဆင်. အခြား icon များခရမ်းရောင်ပုစဉျးအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုကြသည်နေစဉ်, မက်မွန်ရောင်စုံပန်းပွင့်, အဆိုပါရှေငါးနှင့်အစိမ်းရောင်လိပ်ပြာ. လည်း, ရိုင်းအိုင်ကွန်အဖြစ်အစိမ်းရောင်မေးခွန်းသင်္ကေတလုပ်ရပ်နှင့်စပျစ်သီးပြွတ်ဖြစ်နိုင်သောအခါကထိပ်တန်းပေးချေမှုပေးခြင်းကိုမဆိုသင်္ကေတအဖြစ်အသွင်ပြောင်းပါလိမ့်မယ်.
ဒါကရတဲ့နေဖြင့် activated ဖြစ်ပါတယ် 3, 4,5သို့မဟုတ်6အဆိုပါ reels အပေါ်တစ်နေရာရာမှာလွှင့်သင်္ကေတများ. ဤရွေ့ကားကိုတက်ယူပါလိမ့်မယ်2အရှင် reel ရာထူး, အဆိုပါကစားသမားသာဒီတက်ကြွစေနိုင်ရန်အတွက်အမြင်အတွင်းဝက်သင်္ကေတလိုခငျြ.
ယခု, ငါး, ခွောကျ, ခုနစျပါးသို့မဟုတ်ရှစ်အခမဲ့လှည့်ခြင်းများအသီးသီးကစားသမားပေးတော်မူလတံ့. နှင့်, နှစ်ခုနှင့်ခြောက်လရိုင်း icon များအကြားလှည့်ခြင်းများအသီးအသီးတို့သည် reels ပေါ်တွင်တင်ပါလိမ့်မည်ပြီးနောက်. ဒီမှာ, ပထမဦးဆုံးနှစ်ဦးကိုကျပန်းတက်ချထားပါသည်ပေမယ့်မဆိုအပိုဆောင်းသူတွေကိုစပျစ်သီးပြွတ်ဘေးမှာတိုးဦးမည်. လည်း, အဆိုပါကစားသမားမှီပါလိမ့်မယ် 1 ပိုပြီးလှည့်ဖျား, အမှု၌စုစုပေါင်းဆုပမာဏကို 10x စုစုပေါင်းလောင်းကြေးထက်လျော့နည်း.
ကျပန်း Wild / လူစားထိုး
ဤပြွတ်တစ်ဦးပေးချေမှုများအတွက်အတွက် join မှီတိုင်အောင်နိမ့်ဆုံးလေးတူညီနေတဲ့အခြေဂိမ်းထဲမှာသင်္ကေတများကြံ့များ၏အနည်းဆုံးနှစ်ခုပြွတ်အဆိုပါ reels ဖို့နေရာချပါလိမ့်မည်လာပြီဖွငျ့ဤဗြိတိန်နိုင်ငံတွင် slot နှစ်ခုအွန်လိုင်းဂိမ်းထဲမှာဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်.
ဤသည်တို့အကြားနှစ်ဦးကိုတူညီပြွတ်လာပြီခြင်းဖြင့်အစပျိုးနေသည်5နှင့် 8 သင်္ကေတများ. ယခု, အဆိုပါကစားသမားရာအရပျတှငျကငျြးပခဲ့သောပြွတ်နှင့်အတူအခမဲ့ respin ရယူဦးမည်. တိုင်းနောက်ထပ်တူညီသင်္ကေတများဆင်းသက်ပြီးခဲ့သည့်ပေးချေမှုအထိအပိုလှည့်ဖျားပေးသွားမှာပါ.
နှစ်ခုကြဲဖြန့်သင်္ကေတဟာ reels နှင့်အခြားအပေါ်သို့ဆင်းသက်အခါတိုင်းဤသည်ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါ 1 ရုံမြင်ကွင်းကိုအပြင်ဘက်မြေယာ. သို့သျောလညျး, တတိယသင်္ကေတအခမဲ့လှည့်ခြင်းများကိုသက်ဝင်မှအမြင်သို့တက် nudged မည်.
Shangri-la ၏ဒဏ္ဍာရီဇာတ်လမ်းများ:စပျစ်သီးပြွတ်ချေတစ်ဦးကောင်းမွန်စွာတည်ဆောက် slot ကဖြစ်ပါတယ်. ဒါဟာရိုးရှင်းတဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေနဲ့ထိရောက်သောဆုကြေးငွေ features တွေပါဝင်သည်. ဤသည်ဗြိတိန် slot နှစ်ခုအွန်လိုင်းဂိမ်းအရှင်တစ်ဦးအလတ်စားကှဲလှဲရှိပြီး, တဦးတည်းကြီးတွေကိုအနိုင်ပေးရဖို့မြျှောလငျ့နိုငျ.